Fonon-tanana «friztera» »Akanjo fivarotana mangatsiaka • peta-kofehy solosaina P&M
Ny fonon-tanana vita amin'ny frizera dia ampahany lehibe amin'ny fampitaovana ho an'ny mpiasa fivarotana mangatsiaka. Matetika ny tanana dia miharihary amin'ny fifandraisana mivantana amin'ny entana sy fitaovana. Matetika iharan'ny hatsiaka izy ireo noho ny fisehoan'ny habakabaka sy ny fihenan'ny maripana ambany, ny rivotra matetika misy hamandoana avo. Matetika ny frostbite dia manomboka amin'ny loko mena amin'ny hoditra, satria mihombo ny fivezivezena mba hanafana ireo faritra mangatsiaka. Ny soritr'aretina manaraka dia ny fanaintainana, ny mangidihidy ary ny fahatsapana ny fivontosana tanana. Ny haben'ny frostbite dia miankina amin'ny fotoana sy ny fepetra,
izay nanehoan'ny hoditra ny vokadratsin'ny hafanana ambany. Ny fonon-tànana dia fiarovana tonga lafatra amin'ny maripana ambany, ary mamela anao hanao ny adidinao malalaka. fonon-tanana vata fampangatsiahana vokatra avo lenta dia mamela anao hiaro ny tananao amin'ny fanala, ka izany no mahatonga ny magazay fivarotana hanome vokatra avo lenta ihany avy amin'ireo mpamokatra natolotra.
Fonon-tànana POLAR RANGE COLDSTORE ho an'ny hatsiaka sy fitehirizana mangatsiaka
Fonon-tànana ho an'ny vata fampangatsiahana sy efitrano mangatsiaka TG2 XTREME COLDSTORE GLOVES
Fenon-tànana matihanina isan-karazany no mahatonga ny mpanjifa vonona ny hividy vokatra tsy fonon-tànana ihany, fa koa ny akanjo rehetra ho an'ny frizera sy fivarotana mangatsiaka, misafidy pataloha, palitao na kiraro. Fleece Drivers fonon-tanana mafana dia vokatra mifanaraka amin'ny fenitra EN388. Ny fonon-tànana TG1 Pro Coldstore vita amin'ny voasary dia vokatra misy kofehy Thinsulate. Ny maodelin'ny fonon-tanana Arctic Gold Coldstore na fonon-tanana Eisbaer Freezer izay mahafeno ny fepetra takiana amin'ny EN 511 / EN 388 - vokatra azo avy amin'ny tolotra omenay ireo. Ny karazana fonon-tànana rehetra dia nofaritana tamin'ny antsipiriany mba hahamora ny fifantenana.
Fonon-tanana mafana mpamily volom-borona
Vidiny manintona sy avo lenta
Ny orinasanay dia mamatsy zavamaniry fanodinana, trano fanatobiana entana, magazay mangatsiaka, orinasam-pitaovana ary miteraka izany baiko lehibe vokatra. Noho io dia afaka niasa izahay fihenam-bidy manintona amin'ny mpamokatra anay, ka miteraka vidim-pidinana ho an'ny mpanjifa. Fanampin'izany kalitao avo lenta ny vokatra dia mahatonga ny mpanjifa afa-po maro hiverina eto amintsika, ary izany dia ahafahantsika mitazona ny vidin'ny fividianana ny mpanjifa amin'ny ambaratonga ambany.
Ho an'ny ankamaroan'ny akanjo sy lamba dia afaka manisy marika amin'ny sary rehetra izahay, manamboatra sary amin'ny alàlan'ny fomba amboradain'ny solosaina na fanonta-efijery. Manana ny toeran'ny masininay manokana izahay, ahafahantsika manaraka ny fizotran'ny fanamarihana isaky ny dingana.
Fonon-tanana ho an'ny vata fampangatsiahana sy efitra mangatsiaka TG1 PRO COLDSTORE
vilia ho an'ny fivarotana mangatsiaka sy vata fampangatsiahanaakanjo miarofonon-tànana vata fampangatsiahanaFonon-tànana mangatsiakafonon-tanana ho an'ny mari-pana ambanyFonon-tanana Gold FreezeFree fonon-tananaFonon-tànana volom-boronaFonon-tanana fivarotana mangatsiakafonon-tanana mafana
Hamarino ity tolotra ity